Salaad Roobdoon ah oo Maanta Laga Oogay Guud ahaan Deegaannada Somaliland – Goobjoog News
Salaad Roobdoon ah oo Maanta Laga Oogay Guud ahaan Deegaannada Somaliland
Deegannada Somaliland ayaa saaka si wadajir ah looga oogay salaad roobdoon ah oo Alle lagu weydiisanayo inuu raxmaddiisa ugu deeqo deegaannada ay abaaruhu ka jiraan ee bariga Somaliland.
Salaaddan Roobdoonka ah waxay dadweynuhu iskugu soo baxeen goobaha garoomada kubadda iyo masaajidadda waaweyn halkaasi oo duco iyo salaadaba lagu oogay.
Masuuliyiinta Somaliland ayaa dadweynaha halkaasi kula tukaday waxaana laga sheekeeyey deegaannada ugu badan ee ay abaaruhu ka taagan yihiin oo ay ugu horreeyaan gobollada Sool iyo Sanaag qaybo ka mid ah .
Deegaannada ay abaaruhu ku dhufteen oo qaarkood ay u mareyso sannadkii labaad ee aaney roob wanaagsan aaney helin; ayaa waxa abaartu galaafatay kumanaan xoolo ah halka ay barakac ku ridday reer miyi fara badan.
Deegaanka Ceel-afweyn oo ka tirsan gobolka Sanaag waxa uu ka mid yahay deegaannada abaaruhu ku dhufteen waxaana halkaasi is kaga hayaamay reero tiro badan oo u adkaysan waayey saameynta ay deegaankooda ku yeelatay abaartu .
Maamulka Somaliland ayaa soo saaray qeylo-dhaan ay u direen beesha caalamka iyo cid kasta oo gargaar ka geysan karta xaaladda abaareed ee ka sii dareysa deegaanno u badan bariga Somaliland.
Diyaarado Duqeeyey Saldhig Al-shabaab Ku Leeyihiin Duleedka Afgooye
Iskuullada Caabud-Waaq Oo Albaabada Loo Furay Kadib Dhowr Maalin Oo Ay Xirnaayeen
Isticmaalka Mobillada Iyo Computerada Oo Laga Deyriyay Ka Hor Hurdada